प्रचन्डले राष्ट्रपतिलाई सोधे- हिजोको कदम सकारात्मक कि नकारात्मक ? | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र नपठाएकोमा एमाओवादी रुष्ट
छोरीले खोसिन् आफ्नै आमाको लोग्ने →
प्रचन्डले राष्ट्रपतिलाई सोधे- हिजोको कदम सकारात्मक कि नकारात्मक ?
Posted on 24/11/2012 by शिव पौडेल | टिप्पणी छोड्नुहोस्
बालकृष्ण अधिकारी, काठमाडौं, मंसिर ९ – एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपतिले सहमतिका लागि गरेको आहृवान सकारात्मक भएको जनाएका छन् । आज विहान शीतल निवासमा राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई भेटेर उनले सहमतिको लागि कदम चालिएको भए कदम सकारात्मक भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले हिजो राष्ट्रपतिले सहमतिय सरकारको लागि गरेको आह्वानलाई आफ्नो पार्टीले असंवैधानिक भनेको जानकारी राष्ट्रपितलाई गराए ।
राष्ट्रपतिले ७ दिनभित्र प्रधानमन्त्रीको नाम सिफारिस गर्न हिजो दलहरुलाई आहृवान गरेकोमा एमाओवादीको आज बिहान बसेको पदाधिकारी बैठकले आपत्ति प्रकट गरेको थियो ।
पदाधिकारी बैठकलगत्तै शीतल निवासमा राष्ट्रपतिसँग भेट गरेपछि बाहिरिएका दाहालले पत्रकारसँग भने, ‘सहमतिकै लागि हो भने सकारात्मक छ । कार्यकारी अधिकार आफै लिने हो भने खेदजनक छ ।
उनले राष्ट्रपतिलाई आह्वान गर्नुको कारण के हो भनेर सोधेको पनि बताए । ‘आह्वानको अर्थ के हो? भनेर मैले सोधेँ,’ उनले भने।
तर राष्ट्रपति यादवले अध्यक्ष प्रचन्डलाई दलीय सहमति बिना आफूले कुनै पनि कदम नउठाउने जानकारी गराएका थिए । ‘सहमतिय सरकारका लागि आह्वान गरेको सहमति नै होस् भनेर हो,’ राष्ट्रपतिको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रचन्डले भने ।
राष्ट्रपतिले मुलुक शुन्यतामा नजाओस र छिटो निकास पाओस् भनेर हिजोको कदम आएको प्रचन्डलाई भनेका थिए । ‘राष्ट्रपतिले म केही गर्दिन र राजनीतिक दलले नै समस्याको हल गर्ने हो’ भनेर भनेका पनि प्रचन्डले जानकारी दिए ।